Shirkad iswiidhish oo lagu eedeeyey iibsiga shidaal suuq madow - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay torsdag 4 maj 2017 kl 16.30
Is-daba-maryeeyn lagu haysto shirkadda Gunvor International
Dokument qaarkood la madoobeeyey, sawirka sare beejaj qoraallo la eegeyo. sawir: Sveriges Radio
Baaris hoose oo ay laanta wararka ekot ku sameesay shidaal suuq madow ah ee laga keeno dalka Baalaraashiya ey waraaqo caddeeyn ahi muujineyaan in shidaalkaasi laga iibiyey shirkad laga leeyahay dalka Sweden ee lagu magacaabo Gunvor International – waana shirkad ka mid ah shirkadaha ugu waaweeyn ee olyada oo uu gacanta ku hayo jeneraal konsulka Sweden u fadhiya magaalada Jeneev, Torbjörn Törnqvist.
Laanta wararka Ekot ayay gacanta u soo galeen dokumentiyo caddeeynaya baaris lagu sameeyey shidaal suuqa madow ee laga keeno dalka Beela ruush sannadkii 2007. Howshan ayey la socdeen ama gacan ku lahaayeen qaar ka mid ah madaxda sare ee dalkaasi. Qoraal ka mid ah dokumentigaa ayay ku caddeeyd ciddii ugu dambeeysay ee shidaalkaa laga iibiyey. Waxayna u qornayd sidan:
– Si xaqiiq ah oo uu tartan furan ku dheehan yahay ayaannu ula howl-galnaa shirkadaha dalkaasi ruushka. Marar badanna waannu ku guuleeysanaa qandaraasyada. Waa xaalad sidaa u sahlan ayuu yiri Torbjörn Törnqvist waagaa.
– Si jaban shidaal kuma iibsan karno. Cid kale oo sidaa ku heli kartaana ma jirto. Shidaalka waxaa maanta laga iibiyaa cidda bixisa kharashka ugu badan, sida uu sheegay.
Hase yeeshee sida ay idaacaddu qoraallo ku hayso ayaa kumanaan tan oo shidaal ah si suuq madow loo soo mariyaa dalka Baalaruush oo ay soo gaaraan shirkadda Gunvor.
Af-hayeen u hadlayay shirkadda Gunvor ayaa farriinta mail-ka ku qoray in shirkaddu aanay haba yaraatee wax khalad ah gelin. Iyadoona ganacsigaasi uu dhacay kolkii uu soo dhaafay xuduudda dalka Beela Ruushka.
"Masuuliyaddu waxay saaran tahay cidda ka soo dhoofisay Beelaruush, sida uu qoray.
In shirkadda Gunvor la socotay in shidaaku ahaa mid suuq madow ayaan ku caddeeyn qoraallada dokumentiga ah ee idaacaddu faraha ku hayso. Hase yeeshee kolkii la waydiiyay sarkaal ka tir-sanaa ciidanka nabad-sugidda ee KGB Andrei Molchan oo baarista qayb ka ahaa uu sheegay in aanay suurtagal ahayn inaan laga war-qabin.
Ma laga yaabaa in shirkadda Gunvor aanay war ka hayan?
– Waa mid aan suurtagal ahayn. Haddii kale looma baahdeen gacan-dhexaad, sida uu sheegay Andrei Molchan.